Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Dhex mara dhaxalka Seychelles
Madxafka Qaranka ee Seychelles ee Taariikhda
Madxafka Qaranka ee Taariikhda Seychelles wuxuu soo daabulayaa dadka soo booqda 250 sano oo la soo dhaafay isagoo dhadhaminaya dhaxalka Creole ee hodanka ah ee jasiiradaha.
Matxafka Qaranka ee Taariikhdu waa tacabur ay ka buuxaan qaab-dhismeedkii gumaysigu, farshaxan-yahannadii, iyo qolalkii galleyaasha.
Galleries -ku waxay muujinayaan dhaqanka Creole, oo ka dillaacay farshaxan geesinimo leh oo firfircoon - laga bilaabo muusikada iyo qoob -ka -ciyaarka, ilaa halabuurka iyo farshaxanka, ilaa cuntada macaan.
Xusuusta la abuuray intii lagu guda jiray sahaminta matxafka waxaa loo qaadan karaa guriga sidii xusuus -qoryo qaab caruusad -dhaqmeed dhaqmeed ah, buug -dhaqmeed, boorsooyin, alwaax alwaax ah, iyo qaar kaloo badan.
Runtii qofku muu soo bandhigin quruxda Jasiiradaha Seychelles ilaa uu ka baadho xididada jasiiradaha. Waxay ku taallaa wadnaha Victoria, oo ah caasimadda loo socdo, oo ka durugsan Taallada Clock ee caanka ah, Madxafka Qaranka ee Taariikhdu wuxuu martigeliyaa qolal badan oo ka sheekeeya sheekooyinkii hore iyada oo loo marayo farshaxanno iyo sawirro gaar ah.
Gabal taariikh ah
Matxafka Qaranka ee Taariikhdu wuxuu u adeegaa xusuusta wixii la soo dhaafay, kaliya kuma koobna waxa ku jira laakiin sidoo kale qaab-dhismeedkii gumaysiga oo ka tarjumaya qaab-dhismeedkii hore ee Seychelles. Madxafku markii hore u dhisay Bangiga cusub ee Oriental si ay u isticmaalaan, madxafku wuxuu albaabada u furay 1965 -kii oo hadda wuxuu ku yaallaa wixii hore u ahaan jiray hoyga Maxkamadda Sare ee Seychelles, ka dib markii uu ka soo guuray waxa hadda ah Xafiiska Duqa Victoria ee 1990.
Ku soo dhaweynta albaabka madxafka waa waxa la rumeysan yahay inay tahay taalada ugu yar Boqorada Fiktooriya ee ku taal caasimada yar ee loogu magac daray Boqorada Victoria Jubilee Fountain oo la soo bandhigay, intii uu noolaa boqorka mudada dheer noolaa, 5 Janaayo 1900 oo ay qortay Lady Mary Jane Sweet-Escott, xaaska Maamulaha iyo guddoomiyihii ugu horreeyay ee Ingiriiska ee Seychelles, Sir Ernest Bickham Sweet-Escott. Dhowr talaabo ayaa ka fog bur-burkii Pierre Poivre, oo ahaa maamulaha ujeedka Isle de France iyo Ile Bourbon oo mas'uul ka ahaa in qorfaha iyo dhir udgoon lagu soo bandhigo jasiiradaha iyada oo la aasaasay Jardin du Roi, taas oo dhiirrigelin ka dambaysay jardiinooyinka hadda jira ee isla magaca ee Enfoncement, Anse Royale.
Waxaa loo xilsaaray inay muujiso taariikhda Seychelles iyo soo iibsiga, xafididda iyo soo bandhigida waxyaabaha taariikhiga ah ee xiisaha qowmiyadeed oo tusaale u ah caadooyinka iyo hababka nolosha waqtiyadii la soo dhaafay, madxafka waxaa dib loo cusboonaysiiyay 2018 si loogu daro bandhigyo dhijitaal ah iyo farshaxanno badan iyo galleries daboolaya dhinacyo ballaaran taariikhda Seychelles oo ay ku jiraan dhaqaalaha, siyaasadda, dhacdooyinka muhiimka ah iyo dhaqanka.
Wadnaha guriga Seychelles
Dadka reer Seychelles waxay caan ku ahaayeen cunnadooda xiisaha leh, waxay lahaayeen qalab gaar ah oo ka caawiyay inay keenaan isku -darka qalaad ee dhir udgoon iyo walxo cusub. Maalintii hore, jikada waxay ahayd dhisme ka duwan guriga weyn, oo loo dhisay si looga hortago dabka guriga. Qalabyada jikada ee Creole ee caadiga ah sida hoobiye iyo saxaro, koob dhaldhalaalka iyo taargooyinka, grasa kassava iyo 'marmit', dheri wax lagu karsado oo bir ah oo laga helo guri kasta, ayaa lagu arki karaa bandhigga. Qayb muhiimad weyn u leh qoyska Creole, bandhigyada jikada ee madxafku wuxuu hayaa farshaxanno wali lagu isticmaalo kushiinnada casriga ah agagaarka Seychelles.
Sawir -gacmeed kalluumeysatada maxalliga ah iyo burooyinkooda alwaax -dhaqameedka ah, doon yar oo kalluumeysi, ayaa ku gaarsiin doonta maalmaha ay kalluumeysatadu subaxnimadii hore ku dhiirran lahaayeen kalluunka cusub. Haddii aad nasiib badan tahay, oo goor hore kugu filan, waxaad arki kartaa hab -dhaqameedkan caadiga ah markaad subaxdii ku lugaynayso xeebaha xeebaha sida Beau Vallon. Marka la soo bandhigo, waxaad ka heli kartaa dabin kalluun bamboo gacmeed lagu sameeyo oo loo yaqaan kazye iyo xitaa lansiv, qolof qallafsan, oo kalluumeysatadu ay ku sasabi jireen Seychelles guryahooda xeebta ama suuqa si ay u iibsadaan qabashada cusub ee maalinta, cibaado ayaa ilaa maanta jirta.
Daawada dabeecadda ayaa qayb ka ah dhaxalka nool ee Seychelles. Ahaanshaha ummad jasiirad yar ah, dadku waxay ka faa'idaysteen inta ugu badan ee ay gacmahooda ku heli karaan tanna waxaa ku jira daawo. Waxaa lagu barakeeyey kala -duwanaanta hodanka ah, daawooyinka dhirta oo aad ka arki karto bandhigga, waxaa loo adeegsaday in lagu daweeyo dhammaan noocyada cudurrada. Laga soo bilaabo tisanes -ka cuduro badan iyo xanuunno, balms qaboojinta gubashada, tonics ama 'rafresisan' oo laga diyaariyey caleemo iyo xididdada dhirta, daawooyinkan badankood wali waa la adeegsadaa maanta waxaana cilmi ahaan loo xaqiijiyay inay faa'iido u leeyihiin caafimaadka qofka. Xitaa waad arki kartaa qaar ka mid ah dhirtaas marka aad sahaminayso qaar ka mid ah jasiiradaha 'dabeecadaha badan ee dabeecadda.
Dhaqanka Creole wuxuu ku qarxayaa farshaxan geesinimo leh oo firfircoon - laga bilaabo muusikada iyo qoob -ka -ciyaarka ilaa halabuurka iyo farsamada gacanta. Bilowga farshaxanka ee dadka Seychelles waxaa lagu soo bandhigaa farshaxanno sida farshaxanno iyo qalab muusig dhaqameed oo ay ka mid yihiin durbaannada afka iyo qalabyo kale oo la sameeyay gudaha Seychelles. Waxa kale oo aad ka heli kartaa sawirro iyo farsamooyin kale, kuwaas oo badankoodu, sida bacaha rafcaanka iyo koofiyadaha, ay noqdeen xusuusta caanka ah.
Ku noolaanshaha sida Seychelles
Habka dhaqanka Seychellois ee munaasabadaha kala duwan iyo timaha timaha caadiga ah ee ay dumarku xirtaan xilligaas ayaa lagu arki karaa bandhigga mid ka mid ah galaallada madxafka. Xitaa waad ogaan kartaa qaar ka mid ah cayaar -dhaqameedka, kuwaas oo qaarkood la soo gudbiyay oo weli ku dhex nool bulshada maanta. Markaad sahamiso qaar ka mid ah waxyaabahan farshaxanka ah waxaad ogaan doontaa sida joogitaanka Afrika, Aasiya iyo Yurub u qaabeeyeen dhaqanka Creole.
Xusuusinta taariikhda Seychelles
Ma jirto hab ka wanaagsan oo lagu xasuusan karo safarkaagii aad ku soo martay hoolalka taariikhda marka loo eego inaad guriga u qaadato xusuus -qor yar. Socdaalkaaga ka dib waxaad joogtaa dukaanka hadiyadda ee madxafka oo haya hadiyado kala duwan oo loogu talagalay dadka da 'walba leh. Dhallinyaradu waxay u soo qaataan caruusad caado dhaqameed ah ama buugga sheekooyinka sheekooyinka wakhtiga hurdada markay u sii qulqulayaan dhulka riyada. Waxaad ka heli kartaa farsamooyin maxalli ah oo u dhexeeya bacaha ilaa hal -abuurka alwaax oo xitaa waad qaadan kartaa guriga marmit yar! Waa hubaal inaad naftaada iyo dhammaan kuwa aad jeceshahay u heli doonto wax!